उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि ‘प्यारासाइट’ले जित्यो - लोकसंवाद
चैत्र २४, २०७६, सोमबार
उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि ‘प्यारासाइट’ले जित्यो
काठमाडाैं । इतिहासमै पहिलो पटक ओस्कारमा उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि दक्षिण कोरियाली चलचित्र ‘प्यारासाइट’ले जितेको छ ।
एकेडेमी अवार्डको ९२ वर्षको इतिहासमा विदेशी भाषाको चलचित्रले यो अवार्ड जितेको थिएन । उक्त चलचित्रले छिँडीमा बस्ने गरिब परिवार र भव्य महलमा बस्ने धनी परिवारबीचको भेद दर्शाउँदै सामाजिक व्यवस्थामाथि व्यङ्ग्य गरेको छ ।
चलचित्रको निर्देशन बङ जुन होले गरेका हुन् । उत्कृष्ट अभिनेत्रीतर्फ ‘जुडी’ चलचित्रकी अभिनेत्री रेनी जेलवेगरले अवार्ड जितिन् भने ‘जोकर’बाट जोआक्विन फिनिक्सले उत्कृष्ट अभिनेताको उपाधि हात पारेका छन् ।
उत्कृष्ट सहायक भूमिकाको अवार्ड पुरुषतर्फ ‘वन्स अपन अ टाइम इन हलिउड’का लागि ब्राड पिट र महिलातर्फ ‘म्यारिज स्टोरी’बाट लाउरा डेर्नले जितेका छन् । ‘प्यारासाइट’ले उत्कृष्ट चलचित्र र पटकथासहित कूल चार अवार्ड जितेको थियो ।
रामकृष्ण ढकालकाे पहिलो रेकर्डिङ र एल्बममा रहेकाे गीत 'बाँधिन लाग्दा माया'को रचना सन्दर्भ
मौलिक नेपाली बाजाका धुनहरूलाई आम जनताको सम्पत्ति बनाउने विषयमा छलफल
‘जेल पनि सहुँला, नेल पनि सहुँला‘ बाेलको गीत सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
छक्का पञ्जा ३ अव डिशहोम सिनेमा घरमा
कोरोनाले समाजमा पारेको सकारात्मक प्रभाव
जन्म र मृत्यु जस्तै दुःख पनि जीवनको अर्को कठोर वास्तविक अन्तिम सत्य
फर्कलान् र ती दिनहरू ! 'नवराज बाबूू जस्तो हुनू' !!
लकडाउन : कसरी अवसरमा बदल्न सकिन्छ चुनौतीलाई ?
शिक्षण सिकाइको चुनाैती: नयाँ र पुरानो पुस्ता बिचको अन्तरपुस्तेनी खाडल
‘एकान्तवास’ को वास्तविक बोधः फुर्सद वरदान र साधना गर्ने सुअवसर हो कि स्वतन्त्रताको आलाप ?!
सबै जीवहरूका अभ्यन्तरमा रहेको 'म' रूपी विद्यमान अवस्था
चीनको महामारी नियन्त्रणकाे पाठः कठोर अनुशासन, दृढ इच्छाशक्ति तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग
शिवम् सिमेन्ट्सः ३८० परिवारमा खाद्यान्न र आइसाेलेशन बेडकाे लागि आर्थिक सहयोग
अर्को हप्ता थप चुनौती : ट्रम्प
रासन बोकेर घर-घरमा राज्यमन्त्री